Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း )
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
သည်းခြေအိတ်သည် အသည်း၏အောက်တွင် ရှိသော အိတ်အသေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အသည်းမှ ထုတ်လုပ်လိုက် သော သည်းခြေရည်ကို သိမ်းဆည်းပေးပြီး အစာစား သောအခါ သည်းခြေရည်များကို အူများဆီသို့ ပို့ပေးပါသည်။ သည်းခြေရည်သည် အစာတွင်းမှ အဆီများကို ချေဖျက်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းကို သည်းခြေ အိတ်ရောဂါဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ သည်းခြေအိတ်ရောင် ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေ ရည်များကို အူသို့သယ်ယူသော ပြွန်တွင် သည်းခြေကျောက် များ ပိတ်ဆို့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းသည် အဖြစ်များပါသည်။ အ မျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားပါသည်။ အသက်ကြီးသောသူများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားပါသည်။ သည်းခြေ အိတ်ကြောင့် မဟုတ်သော သည်းခြေအိတ်ရောင် ရောဂါ သည် အမျိုးသားများတွင် ပို၍ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ ဝမ်းဗိုက် အပေါ်ညာဖက်ခြမ်းတွင် နာကျင် ခြင်း ကြွက်တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ အခြား ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ-
ရင်အုပ်၊ ကျောအပေါ်ပိုင်း နှင့် ညာဖက်ပုခုံး တို့တွင် နာကျင်ခြင်း။ အသက်ရှူသောအခါ ဖိအားပေးပြီး လှုပ်ရှားသောအခါတွင် နာကျင်ပါသည်။
အန်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း။ များ သောအားဖြင့် အဆီများသော အစားအစာများ စား ပြီးနောက်တွင် ဖြစ်သည်။
သည်းခြေရည်များကို အူသို့ သယ်ပေးသော အဓိက ပြွန် သည် ကျောက်ကြောင့် ပိတ်ဆို့သွားသောအခါ အရေပြားယားယံခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သည်းခြေအိတ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်းသည် ကိုယ် အပူချိန်တက်ခြင်း နှင့် ချမ်းတုန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါ သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာများ ရှိပါက သို့မဟုတ် မေးလိုသည်များ ရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပါ။ ပြင်းထန်စွာ အစာအိမ်အောင့်ပြီး မလှုပ် ရှားနိုင်ပါက ဆရာဝန်ကို အမြန်ခေါ်ခိုင်းပါ။
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းသည် သည်းခြေကျောက် ကြောင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ သည်းခြေရည်ပြုလုပ်ရာ နှင့် သည်း ခြေအိတ်တွင် သိမ်းဆည်းရာတွင် ပြဿနာ ဖြစ်သောကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြားအမျိုးအစားမှာ ကျောက်မရှိဘဲ ရောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြား ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်း များမှာ သွေးနီဥများ တံစဉ်ပုံကဲ့သို့ ဖြစ်သောရောဂါ၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုများ နှင့် ဆီးချိုသွေးချို တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက် မရှိဘဲ ရောင်ခြင်းသည် အသက်ကြီးသူများ၊ အလွန်ဖျားနာ သူများနှင့် အိပ်ယာထဲလှဲနေရသော အသက်ကြီးသူများတွင် တွေ့ရပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းကို မြင့်စေသော အချက်များ မှာ သည်းခြေကျောက် ဖြစ်စေသော အချက်များပင် ဖြစ်သည်။ အသက်၊ အမျိုးသမီးဖြစ်မှု၊ အချို့လူမျိုးအုပ်စုများ (ဥပမာ- ဒေသခံအမေရိကန်)၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အစာငတ်ခံ ခြင်း၊ အဆီများသော အစားအစာများ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျလွန်းခြင်း တက်လွန်းခြင်း၊ ဆေးများ နှင့် ကိုယ်ဝန် တို့ ပါဝင်သည်။
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်း နှင့် ဆေးစစ်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ပြီး ရောဂါအဖြေရှာနိုင်ပါသည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်း နှင့် ultrasonography များလုပ်၍ ရောဂါ အဖြေကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ Ultrasonography ရလဒ် သည် မရှင်းလင်းပါက အထူး ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (HIDA scan) လုပ်ကြည့်ပါ။
Cholecystitis (သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သည်းခြေအိတ် နှင့် သည်းခြေကျောက်ကို ခွဲစိတ်ကုသ ခြင်းဖြင့် ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစား ခွဲစိတ်၍ ဖယ်ထုတ်ခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြ ပါသည်။ ထိုနည်း သည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် မြန်ဆန်ပြီး ဆေးရုံ ရောက်ရောက်ချင်း ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ပါသည်။ အသေးစား ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ထုတ်ခြင်းတွင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ဝမ်းဗိုက်တွင် သေးငယ်သော လှီးဖြတ်ရာ လေးခု ပြုလုပ်ပါ သည်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ကိရိယာများဖြင့် ထိုလှီးဖြတ်ရာ များမှ သည်းခြေအိတ်ကို ဖယ်ထုတ်ပါသည်။
အသေးစား ခွဲစိတ်၍ဖယ်ရှားခြင်းကို ပြုလုပ်မရပါက ဆေးရုံကြာကြာတက်ရန် လိုသော စံပြု ထားသော ခွဲစိတ်မှု ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သည်းခြေအိတ်အား ဖယ်ထုတ်ခြင်း သည် ပုံမှန်ဘဝကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သည်းခြေအိတ် ဖယ်ထုတ်ပြီး ၆-၁၂ လကြာပြီးနောက် အဆီ များသော အစားအစာများစားပြီးအစာမကြေခြင်း ဖြစ် တတ်ပါသည်။
ကျောက်ပျော်စေရန် ဆေးသောက်ခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဆေးများသည် ကျောက်ပျော်ရန် လများ နှစ်များ ကြာနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုခဲပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် သည်းခြေအိတ် ရောင်ခြင်း ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် သည်းခြေအိတ် ရောင်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
ကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် နာကျင်သည်ဟု ထင်ပါ က ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဝမ်းဗိုက်နာခြင်းနှင့် အတူ အဖျားတက်ပါက ဆရာဝန် ကို ချက်ချင်း ခေါ်ဆိုပါ။
အဆီများများပါသော အစာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အချိန်ကြာစွာ အစာငတ်မခံပါနှင့်။ ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်ကျစေသော အစားများ အား ရှောင်ပါ။
Cholecystitis. https://www.drugs.com/health-guide/cholecystitis.html. Accessed July 13, 2016.Cholecystitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cholecystitis/basics/definition/con-20034277. Accessed July 13, 2016.
. Accessed July 13, 2016.
l. Accessed July 13, 2016.Cholecystitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cholecystitis/basics/definition/con-20034277. Accessed July 13, 2016.
အရိုးစွပ်ပြုတ်လေးသောက် ၊ ထမင်းပူပူလေးစားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိလားဗျို့ ။ ။